Amakhasino eselula kwi-smartphone, ithebhulethi kunye nezinye izixhobo
Ngokuvela kwamathuba obuchwepheshe obutsha, umxholo wekhasino eselula ungene kwilizwe lokungcakaza. Abanye banokudibanisa i-casino eselfowuni kunye neekhasino ezithengisiweyo ekhaya, ezinokuthathwa naphi na. Hayi, asithethi olu hlobo lwekhasino. I-yekhasino yeselula ayonto ngaphandle kweekhasino ezikwi-intanethi, ethi, ngaphandle kwemisebenzi ye-Intanethi, iphinde ivulele iingcango zayo kubadlali besebenzisa ii-smartphones kunye neetafile.
Iibhasino zijonge iimfuno zabathengi bazo. Abadali bayazi ukuba kufuneka bahambe namaxesha, bakhule kwezobuchwephesha ukuze baphumelele ukuthandwa kwabathengi. Iqela labamkeli abasebenzisa i-Intanethi kuphela ngoncedo lwezixhobo zefowuni alinakushiywa - eli qela lihlala likhula, kwaye abaphenduli bathi kwisithuba seminyaka ye-5 inani labantu abasebenzisa izixhobo zecingo lonyuka nge-200%. Iikhasino zenze nje iifowuni zeselula kwaye zitshintshe iindawo zazo ngokungenisa itekhnoloji RWDukuze amaphepha abonakalise ngokuchanekileyo iifowuni kunye neetafile.
Ikhompyuter yekhasino ayisiyo iwebhusayithi kwi-RWD. Le ikwayimidlalo eza kulungelelaniswa nasiphi na isixhobo esiselfowuni, njengefowuni okanye ithebhulethi. Iikhasino zibeke umsebenzi omninzi kuyo, zenza ii-aplikeshini ezikhethekileyo ezivumela ukuba abadlali banxibelelane neseva yekhasino kunye neakhawunti yabo, onokuthi uthathe kuyo ulonwabo lokungcakaza.
I-Betsson yekhasino yeselula
Sebenzisa iBetsson kwi-iPhone, i-iPad kunye ne-Android naphi na naphi na. Kwikhasino ungathembela kwiimvakalelo ezintle kunye nolonwabo olukhulu. Hit jackpot ezinkulu, dlala indawo oyithandayo. Uyazithanda ezakudala? ukulwa i-blackjack kunye ne-roulette etafileni, okanye uzuze izandla kwi-poker yevidiyo. Funda uphononongo
Betsafe kwifowuni yakho kunye nethebhulethi
Dlala i-blackjack, i-roulette kunye nemidlalo ye-slot yevidiyo kwifowuni yakho kunye nesixhobo esenziwe nge-Android. Fumana ibhonasi yakho yokwamkela kwaye uthathe amathuba ekunikezelweni kweekhasino zethu ezikhethekileyo Funda uphononongo